Ọnụ Ọgụgụ 20 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọnụ Ọgụgụ 20:1-29
20 Nzukọ ụmụ Izrel dum wee bata n’ala ịkpa Zin+ n’ọnwa nke mbụ, ha wee biri na Kedesh.+ Ọ bụ n’ebe ahụ ka Miriam+ nwụrụ, n’ebe ahụ ka e likwara ya. 2 Ma nzukọ ahụ enweghị mmiri,+ ha wee malite izukọta imegide Mozis na Erọn.+ 3 Ha wee sesa+ Mozis okwu, sị: “A sị nnọọ na anyị nwụrụ mgbe ụmụnne anyị nwụrụ n’ihu Jehova!+ 4 Gịnị mere unu ji dubata ọgbakọ Jehova n’ala ịkpa a ka anyị na anụ na-eburu anyị ibu nwụọ n’ime ya?+ 5 Gịnịkwa mere unu ji dupụta anyị n’Ijipt iji kpọbata anyị n’ebe ọjọọ a?+ Ọ bụghị ebe a na-agha mkpụrụ, ọ bụghịkwa ebe a na-akụ osisi fig na osisi vaịn na osisi pọmigranet,+ mmiri ọṅụṅụ adịghịkwa.” 6 Mozis na Erọn wee si n’ihu ọgbakọ ahụ bịa n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala,+ ebube Jehova wee pụta ìhè n’ihu ha.+ 7 Jehova wee gwa Mozis, sị: 8 “Were mkpara gị,+ kpọkọta nzukọ a, gị na Erọn nwanne gị, gwanụ nkume ahụ dị elu okwu n’ihu ha ka ọ gbapụta mmiri; mee ka mmiri si na nkume ahụ dị elu gbapụtara ha, nyekwa nzukọ a na anụ na-eburu ha ibu mmiri ka ha ṅụọ.”+ 9 Mozis wee were mkpara ahụ n’ihu Jehova,+ dị nnọọ ka o nyere ya n’iwu. 10 E mesịa, Mozis na Erọn kpọkọtara ọgbakọ ahụ n’ihu nkume ahụ dị elu, o wee sị ha: “Nụrụnụ, unu ndị nnupụisi!+ Ọ̀ bụ na nkume a dị elu ka anyị ga-esi mee ka mmiri gbapụtara unu?”+ 11 Mozis wee welie aka kụọ mkpara ya na nkume ahụ dị elu ugboro abụọ: mmiri dị ukwuu wee malite ịgbapụta, nzukọ ahụ na anụ na-eburu ha ibu wee malite ịṅụ mmiri.+ 12 E mesịa, Jehova gwara Mozis na Erọn, sị: “Ebe ọ bụ na unu egosighị okwukwe n’ebe m nọ iji doo m nsọ+ n’ihu ụmụ Izrel, unu agaghị akpọrọ ọgbakọ a banye n’ala ahụ m ga-enye ha.”+ 13 Ọ bụ ya bụ mmiri Meriba,+ n’ihi na Izrel sesara Jehova okwu, e wee doo ya nsọ n’etiti ha. 14 E mesịa, Mozis si na Kedesh zigara eze Idọm ndị ozi,+ sị: “Nke a bụ ihe nwanne gị bụ́ Izrel+ kwuru, ‘Gị onwe gị maara nke ọma ihe isi ike bịakwasịrị anyị.+ 15 Nna anyị hà gbadara Ijipt,+ anyị wee biri n’Ijipt ruo ọtụtụ ụbọchị;+ ndị Ijipt wee malite imesi anyị na nna anyị hà ike.+ 16 N’ikpeazụ, anyị tikuru Jehova,+ o wee nụ olu anyị wee zite otu mmụọ ozi+ wee kpọpụta anyị n’Ijipt; lee, anyị nọ na Kedesh, obodo dị na nsọtụ ókèala gị. 17 Biko, ka anyị si n’ala gị gafere. Anyị agaghị esi n’ọhịa ma ọ bụ n’ubi vaịn gafere, anyị agaghịkwa aṅụ mmiri si n’olulu mmiri gị. Ọ bụ n’ụzọ eze ka anyị ga-aga.+ Anyị agaghị ahapụ ya gaa n’aka nri ma ọ bụ n’aka ekpe,+ ruo mgbe anyị gafere ókèala gị.’” 18 Ma, Idọm sịrị ya: “Esila n’ala m gafere, ka m ghara iji mma agha pụta buso gị agha.” 19 Ụmụ Izrel wee sị ya: “Ọ bụ n’ụzọ ka anyị ga-esi gbagoo; ọ bụrụ na mụ na anụ ụlọ m aṅụọ mmiri gị, aga m akwụ gị ụgwọ ya.+ Ọ dịghị ihe ọzọ m chọrọ ma ọ bụghị iji ụkwụ m gafere.”+ 20 Ma ọ sịrị: “Agafela.”+ Idọm+ wee jiri aka dị ike pụta ibuso ya agha, ya na ìgwè mmadụ. 21 Idọm ekweghị ka Izrel si n’ókèala ya gafere.+ N’ihi ya, Izrel si n’ebe ọ nọ pụọ.+ 22 Nzukọ ụmụ Izrel dum wee si na Kedesh+ kwalie bịarute n’Ugwu Họọ.+ 23 Jehova wee gwa Mozis na Erọn okwu n’Ugwu Họọ, n’akụkụ ókè nke ala Idọm, sị: 24 “A ga-eli Erọn dị ka e liri ndị ya,+ n’ihi na ọ gaghị abanye n’ala ahụ m ga-enye ụmụ Izrel, n’ihi na unu nupụrụ isi n’iwu m n’ihe banyere mmiri Meriba.+ 25 Kpọrọ Erọn na Elieza nwa ya bịa n’Ugwu Họọ. 26 Yipụ Erọn uwe ya,+ chịrị ha yiwe Elieza+ nwa ya; Erọn ga-anwụ n’ebe ahụ, a ga-elikwa ya.”+ 27 Mozis wee mee nnọọ dị ka Jehova nyere n’iwu; ha wee gbagoro n’Ugwu Họọ n’ihu nzukọ ahụ dum. 28 Mozis wee yipụ Erọn uwe ya ma chịrị ha yiwe Elieza nwa ya, e mesịa, Erọn nwụrụ n’ebe ahụ, n’elu ugwu ahụ.+ Mozis na Elieza wee si n’ugwu ahụ gbadata. 29 Nzukọ ahụ dum wee hụ na Erọn anwụwo, ụlọ Izrel dum wee kwaara Erọn ákwá ruo ụbọchị iri atọ.+
Ọnụ Ọgụgụ 20